Gallary kuti Knitting Zvandakashanda
SY52-3S adopts kuroora anonetsa zvikuru kuti tsono akanaka uye kaviri anonetsa zvikuru nokuda zvinonyadzisa tsono, mukuru-nokukurumidza chaisazvitsigira kuti zvinobudirira kuwedzera knitting nokukurumidza nezvikamu 20% -30%. Mativi ose grippers pamwe achicheka zvinoreva zvinobudirira kuderedza mutsvuku kuparadza uye kuvandudza yauinayo. dzakatevedzana iri rinoshandiswa digitaalinen Michina kuti vabudirire mifananidzo kutapurirana, Tuck, pointelle, intarsia, jacquard, pachena shap ...
SY52-3S adopts kuroora anonetsa zvikuru kuti tsono akanaka uye kaviri anonetsa zvikuru nokuda zvinonyadzisa tsono, mukuru-nokukurumidza chaisazvitsigira kuti zvinobudirira kuwedzera knitting nokukurumidza nezvikamu 20% -30%. Mativi ose grippers pamwe achicheka zvinoreva zvinobudirira kuderedza mutsvuku kuparadza uye kuvandudza yauinayo. Dzakatevedzana iri kushandiswa digitaalinen Michina kuti vabudirire mifananidzo kutapurirana, Tuck, pointelle, intarsia, jacquard, pachena zvinoumba, zvinoumba zvakavanzika uye dzimwe nguva muenzaniso knitting mashandiro, naicho anogona wakabatanidzwa kutadza multi-mavara jacquard, intarsia, waya uye pointelle mamiriro okunze.
geji 3-5-7 • 5 • 7 • 9 • 10 • 12 • 14
Knitting Width Shanduka sitiroko, Max 52 "(132cm)
Knitting Speed Max muna 1.2m / chik, 24 chinjika kumhanya yomuropa, chiite mirayiridzo.
Musono Density Achipindira gwenya nemotokari, nemicheka Tuning pamusoro 0-365 paminiti muchikamu
anonetsa zvikuru AC Servo gwenya nemotokari, Max 1-padiki anonetsa zvikuru. 1/4, 1/2, 3/4 namo uye yakanaka-Tuning basa kuwanikwa chero nzvimbo.
Knitting System Single chekufambisa | Single hurongwa.
Triangle Weaving Rinoumba patani. Mumwe hurongwa anogona kuita looping, tucking, uye kwete-knitting panguva, uyewo tama mberi kurera undovakira kumberi kana zvose mberi uye shure pasina zvakananga chengeto.
tsono Selection Mumwe hurongwa ane 8 anoita yakagozha tsono selectors, izvo zvinogona kuiswa kana kubviswa nyore kubva mungoro uye vakaramba nyore.
tsono Bar The simbi tsono vari akaiswa pamusoro tsono mubhedha, zvikamu zvinogona kutsiviwa kana kuputswa
Takedown System Chiite mirayiridzo zvemagetsi gwenya nemotokari, unochinja 24 zvese.
Drive System Nemauto AC Servo Motor, bhanhire-nemhepo, 24 kwevari nokukurumidza selectable uye chinjika mumwe nomumwe chechetere.
mutsvuku vatakuri 2 * 8 rushava vatakuri neimwe kurutivi 4 richitungamirira njanji, switchable chero nzvimbo mukati knitting upamhi.
Stop chitsungo Nokuti mutsvuku kwemasikati, hombe fundo, jira chewaini-kure, tsono breakage, pamusoro-torque achifinyamisa shure, anonetsa zvikuru kukanganisa, kukodzera nenzvimbo nemuti, kunyanya mutsvuku kana richisvika pasi kugadzirwa chipfuro.
Computer Unit Editing angadaro kuitwa Via akaratidza Panel oparesheni, LCD sikirini kuratidza mashoko.
Memory capacity 1024 * 4096, upamhi kana pakureba mapatani zvinogona kugadziridzwa.
Data Storage USB chiyamuro
Display Languages Chinese uye Chirungu. (The dzimwe kutsvakwa mitauro dziripo)
simba 3-danho AC, 220V
chinzvimbo Factor 2.0kw / Machine
miganhu Length x Width x Heights
zvoga Knitting Machinery
Nekombiyuta Flat Knitting Machine
Nekombiyuta Jacquard Flat Knitting Machine
nekombiyuta Knitting Machine
nekombiyuta juzi Knitting Machine
nekombiyuta juzi Ndakasarudza Machine
Zvizere Automatic Shoe Knitting Machine
nekurukirwa chipika Uye juzi Machine
Juzi Knitting Machine Price
Three System juzi Knitting Machine Price
Three-System nekombiyuta Flat Knitting Machine
Two-System nekombiyuta Flat Knitting Machine
Yeshinda juzi Knitting Machine